Faahfaahin ka soo baxaysa qarax ka dhacay Gaalkacyo – Radio Muqdisho
Taliyaha ciidammada isku dhafka ee gobolka Mudug ayaa ku dhintay qarax gordhoweyd ka dhacay magaalada Gaalkacyo, Gaashaanle Sare Cabdi Xukun Cabdullaahi Maxamuud Xoreeye.
Sidoo kale waxaa qaraxa ku dhintay sarkaal kale oo ka tirsanaa ciidammada militariga ah, Cabdiqani Axmed Geyre.
sida ay ku soo warameyso wariyaheena magaalad Gaalkacyo Safiyo Shiikh Cali
Inta la xaqiijiyay illaa labo sargaal ayaa ku dhimaatay qaraxsi qarax ay waxa ku dhaawacmay Dad raydah oo ka agdhawaa halka qaraxu ka dhacay waxan la garsiyay dhawacayadi isbitaalka magaalada Gaalkacyo .
Wararka waxay sheegayaa in qof waxyaabo qarxa isku xiray in uu ka dambeeyay, Mana jirto cid sheegatay masuuliyadda.
Ciidammada isku dhafka ah waa askar laga kala keenay maamullada Puntland iyo Galmudug oo si wada jir ah uga howlgala magaalada Gaalkacyo